Happn waa barnaamijka ugufiican ee lagu shukaansado sidii horeyba loogu sameeyay | Androidsis
Codsiyada ama adeegyada websaydhka si loola kulmo saaxiibo cusub waxaa jira in yar oo doorar kaladuwan leh waana kuwo caan ah. Tan iyo markii waa maxay Badoo maxay tahay Meetic, waxaa jira jaanis wanaagsan oo lagula kulmo xirmooyinkayaga dambe ee shabaqa.
App-ka imminka yimid Spain ee loogu yeero Happn wuxuu la yimaadaa isla ujeeddadaas laakiin wuxuu ku kala duwan yahay, waqtiga aan heysano barnaamijka oo socda oo aan tagno waddada, waxay "iskaan doontaa" isticmaaleyaasha kale ee aan la kulanno si looga dhigo inay ka muuqdaan barnaamijka sidaasna ay kula xiriiri karto. Waxaan fureynaa barnaamijka oo gabdhaha ama wiilasha aan la kulanay markii ugu dambeysay ayaa soo muuqan doona, waxaan xulanaa kuwa aan "jecelnahay" waxaana u diri karnaa wicitaan baraarujin ah si markaa, haddii ay rabaan si loo dhiso xiriir, waxaan sameyn karnaa wadahadal.
1 Sidee ayey u shaqaysaa Happn?
2 Wax ka beddelka dookha
3 Fariimo iyo fariimo dheeri ah
4 Farshaxanka shukaansigu wuu soo noqday
Sidee ayey u shaqaysaa Happn?
Isla marka aan bilowno barnaamijka waxaan ka soo gali karnaa Facebook. Shaashadda weyn waxaan ka heli doonnaa dadka ama adeegsadayaasha aan la kulmi doonno markaan waddada marayno. Waxaan leenahay astaan ​​leh 3 baararka jiifka ah oo aan ka awoodno marin u hel menu-ka dhinaca hagidda oo ka kooban qaybo kala duwan sida astaanta guud, dookhaaga, ku martiqaad asxaabta iyo ogeysiisyada.
Lo primero waxa ay tahay inaan sameyno waa inaan ka tagno astaanta diyaarsan, maaddaama tani ay noqon doonto barta laga bilaabayo ee isticmaalayaasha xiisaynaya inay la xiriiraan ay na baran karaan. Markaad furto, macluumaadka caadiga ah ayaa soo muuqan doona sida boos, shaqo, daraasado iyo ikhtiyaarka ah inaan xoogaa kahadalno nafteenna. Xagga kore profileka waxaan kaheleynaa sawirka aad kaheli karto sawiradii ugu dambeeyay ee aan ku isticmaalnay astaanta Facebook, iyo salaanta iyo counter Crush. Adigoon ilaawin astaanta sawirka si aad u dalbato.
Wax ka beddelka dookha
Halkan ayaynu galnaa waa qayb muhiim u ah kala shaandheynta isticmaaleyaasha kala duwan oo aan la kulmi doonno maalinta oo dhan. Waad dooran kartaa haddii aan rabno inaan la kulanno haweenka ama ragga, ka dibna da'hooda. Qaybta xigta ee aan wax ka beddeli karno waa ogeysiisyada: dadka gudbay, salaanta, burburka iyo farriimaha. Qeybta hoose ee shaashadda doorbididda waxaan fursad u leenahay inaan aragno liiska isticmaaleyaasha xannibmay iyo kuwa la diiday, iyo xulashooyin kale oo taxane ah oo koontada looga jarayo.
Adoo wax ka bedelaya dookhyada, isla isla dhinaca guddi socodka waxaan haynaa ogeysiisyo iyo suurtagalnimada martiqaadka asxaabta, iyo in ka badan ama ka yarba waxaan diyaar u noqon doonnaa inaan u oggolaanno barnaamijka inuu helo dadka iyadoo aan loo baahnayn wax intaas ka badan waxay kuxirantahay hadaan marayno wadada ama xitaa aan galno diskooga.
Fariimo iyo fariimo dheeri ah
Dhinaca kale ee shaashadda ugu weyn, marin looga helo aaladda sheekaysiga waxaan marin doonaa fariimaha aan helno hadday sidaas tahay. Iyo shaashadda ugu weyn, aan dhahno waa xarunta arjiga oo aan ka arki karno astaamaha xiriirada la helay, xitaa si loo helo, loo salaamo ama loo diro sir "sida".
Haddii aan helno qof aan jeclaanay oo aan dooneyno inaan u sheegno, waxa ugu horeeya waa inaad dirtaa "like" ama "like" si qarsoodi ah. Haddii tan aan jeclahay ay tahay isweydaarsi, wadahadal waa la bilaabi karaa, isagoo noqonaya waxa loogu yeero "burburin". Marka laga hadlayo salaanta, waxaa imanaya qaabka lacag bixinta ee Happn, maaddaama salaan kasta oo aan sameyno ay lahaan doonto kharash 1 deyn ah, in kasta oo aan ku kasban karno martiqaad kasta oo saaxiibbadeed guuleysto. Markaad salaantid qofku wuxuu helayaa ogeysiis deg deg ah.
Farshaxanka shukaansigu wuu soo noqday
Abka waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso xiriir, hada inta soo hartay adiga ayey kugu xirnaan doonaan, tan iyo halkan Waxaan la gali doonnaa xiriir dhow haddii aan ku jirno baarka ama baararka casriga ah. Waad dhigi kartaa sawirka ugu fiican laakiin xirfadahaaga shukaansiga ayaa door muhiim ah ciyaari doona maadaama aad qofka ka fogaaneyso mitirrada.
Fikrad aad u xiiso badan laakiin ay tahay in la hagaajiyo, maaddaama isticmaalka batteriga ay ugu wacan tahay adeegyada goobta ay aad u sarreeyaan. Wax aan rajaynayno inay ku xalin doonaan noocyada cusub ee mustaqbalka waana mid aad muhiim u ah. Haddii kale, fikrad aad u wanaagsan oo ka dambeysa barnaamijkan si aan loo waayin maxaa ilaa dhawaa aasaaska u ahaa shukaansiga, Xiriirinta indhaha iyo farshaxanka ogaanshaha sida loola macaamilo naftaada waqti kasta adoo qaadanaya qadar wanaagsan oo ah hagaajinta. Is daji, Happen ayaa ku soo socota si ay kuu caawiso.
happn - Kulamo iyo haasaawe
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijka shukaansiga Happn ayaa yimid Spain
Ma jiraa qof garanaya sida aan ugu dari karo sawirada cusub ee muuqaal ahaanta 'happn'? salaan